နားခိုရာ: July 2008
Posted by little moon at 5:49 PM3comments:
မကြာခင်မှာ ကလေးလေး ရတော့မယ်။ သားလေးပေါ့။ OG ကအရင်တနင်္ဂနွေပြပြီချိန်မှာ ပြောပုံအရာ နည်းနည်းစောမွေးနိုင်တယ်။ သြဂုတ်လထဲလောက်မှာပေါ့။ မိန်းမကတော့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ လိုက်ဝယ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေလေရဲ့။ ကလေးရေချိုးတဲ့ဇလုံ၊ ကလေးပုခက်၊ နို့ဗူး .... စုံနေတာပဲ။ ယောက်ခမကလည်း ဆေးရုံတက်ရင် ယူသွားဖို့ဆိုပြီး ခြင်းလေးနဲ့ ပြင်ဆင်ပေးထားလေရဲ့။ အနှီးလေးတွေ၊ ကလေးအမေ၀တ်ဖို့ လုံချည်၊ ရေခွက်...စုံနေတာပဲ။ ကျေးဇူးတင်စရာပဲ။
Market ထွင်ပြီး ရောင်းတတ်လိုက်ကြတာ။ ရေချိုးတဲ့ ပလပ်စစ်ဇလုံလေးကတင် သုံးသောင်းကျော်တဲ့။ အရုပ်လေးတွေပါတဲ့ ဒီဇိုင်းလှလှလေးနဲ့ပေ့ါ။ ပိုက်ဆံနှမြောလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုက်ဆံကို နှိုက်ယူတတ်တဲ့ ဈေးရောင်းနည်းလေးတွေကို သဘောကျလို့။ EMBA မှာ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်စမ်းရီ သင်ခဲ့သလို့ wants တွေကို needs တွေလို့ ယုံကြည်စေပြီး ဈေးကွက်ရှာပုံတွေ။ ဒီလို ဇလုံနဲ့မှ မချိုးပေးရင်ပဲ မိဘတာဝန် မကျေတော့မလို ကလေးပဲ ရေချိုးလို့ မရတော့မလိုလို ... မှတ်မိသေးတယ် ငယ်ငယ်က ညီမအငယ်ဆုံးကို အဖွားက ထိုင်လျှက်မှာ သူ့ခြေတောက်ပေါ် အသာလေးချလို့ ရေလောင်းချိုးပေးတာကို။
မွေးတာကိုလည်း ခွဲမွေးမယ် ရိုးရိုးမွေးမယ်နဲ့ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို စဉ်းစားရင်းက ဖြစ်နိုင်ရင် ရိုးရိုးပဲမွေးဖို့ ဆုံးဖြတ် ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲတွေအများကြီးပဲ။ ဗိုက်နာလာတဲ့အချိန်မှာ ဆေးရုံမှာ အခန်းမရမှာ၊ ကိုယ့် OGက အချိန်မီ ရောက်မလာမှာ .. တစ်ချို့ OG ကို ပေါ်တင်ပဲ။ Normal Labour ဆိုရင် လက်ကိုမခံတာ။ တော်သေးတယ် SSC က ကိုယ့်ရုံးက software သုံးနေတာဆိုတော့ အထိုက်အလျောက်ရင်းနှီးတယ်။ သူတို့ကိုပဲ အကူအညီတောင်းရတာပေါ့။ ဗိုက်နာချိန်မှာ အခန်းလေးတစ်ခန်းရနိုင်အောင်။ OG အန်တီကတော့ သူလာပေး ပါမယ်တဲ့။ မွေးတဲ့အချိန်တော့မသိဘူး ပုံမှန် ဆေးခန်းတစ်ပတ် တစ်ခါပြချိန်မှာတောင် စောင့်ရတာ ဖင်ဂျွတ်တက်လိုက် သေသွားနိုင်တယ်။ ၀ယ်ဖတ်တဲ့ အားကစားဂျာနယ်ကို ရေးထားသမျှ cover to cover ဖတ်ပြီးတာတောင် ရောက်မလာသေးဘူး :D ဒါပေမဲ့ သူက သဘောတော့ကောင်းတယ်။ ဂရုလဲစိုက်ပါတယ်။
အိမ်မှာလည်း ပစ္စည်းတွေ ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ပေါ့။ အခုငှားနေတဲ့ တိုက်ခန်းက ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းဆိုတော့။ အိပ်ခန်း (၀င်လိုက်တာနဲ့အိပ်လို့ပဲရတယ် ... အဲလောက်ကျဉ်းကျဉ်းလေး) ကလေးမွေးပြီးခါစဆို ခေါ်ထားရမဲ့ Nurse၊ အကူ ခဏလာနေပေးမဲ့ ယောက်ခမ၊ မွေးလာမဲ့ကလေး ... သူတို့တွေအတွက် ဒီခပ်ကျဉ်းကျဉ်းအိမ်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးလေး စိတ်ကူးနေရာချရတာပေါ့။ ဟိုတစ်ရက်က မိန်းမက သူ့အိမ်က နှစ်ထပ်ကတင်ကြီးကို သယ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ လှေခါးပါနေတော့ ခြင်ထောင်ထောင်ရအဆင်မပြေသလိုပဲ။
အဲဂလို အဲဂလိုနဲ့ ကျေးဇူးရှင်လေးကို ကြိုဆိုဖို့ လုံးပမ်းနေရကြောင်းပါ။
မိန်းမရဲ့ ဘလော့ (တစ်ချို့ ဖတ်တဲ့သူတွေ မြန်မာစာမမြင်ဘူးတော့ပြောကြတယ်။ ကြည့်ပေးရဦးမယ်။)
Posted by little moon at 4:25 PM7comments:
Labels: my son, myself
မနက်ဆို ပုံမှန် ခုနစ်နာရီလောက် အိပ်ယာထဖြစ်တယ်။ တနင်္ဂနွေနဲ့ ညနက်နက်မှ အိပ်ဖြစ်တဲ့ ရက်တွေက လွဲလို့ပေါ့။ handphone မှာ နှိုးစက်လေးပေးထားတာပေါ့။ အိပ်ယာကထပြီး နောက်ဖေး မီးဖိုအခန်းကို ၀င်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော့် ဖောက်သည်များက ၀ရံတာ လက်ရမ်းပေါ်တွေမှာ အသင့်စောင့်နေကြပါပြီ။ အများစုကတော့ ခိုတွေပေါ့။ ကျီးကန်းရယ် စာကလေးရယ်လည်းပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆက်ရက်လေးတွေ လည်း လာတယ်ဗျ။ သူတို့ကို မနက်တိုင်း ဆန်ကျွေးဖြစ်ပါတယ်။ ၀ရံတာ လက်ရမ်း တလျှောက် ဆန်လေးတွေ ချထားပေးရင် သူတို့လာစားကြတယ်။ စကျွေးဖြစ်တုန်းက ပိုနေတဲ့ ထမင်းကြမ်းတွေ သိပ်အနံ့အသက် မကောင်းတော့တာနဲ့ ရေစင်စင်ဆေးပြီး ငှက်တွေစားပါစေ ဆိုပြီး ကျွေးထားဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို တစ်ခါနှစ်ခါကျွေးပြီးတော့ ဆန်နေ့တိုင်းကျွေးမယ်ဆိုပြီး ဆန်ဝယ်ကျွေး ပါတယ်။ သူတို့ဆန်က တစ်ပြည် ရ၀၀ကျပ်ဗျ။ တစ်ပြည်ဝယ်ထားရင် လေးငါးရက်တော့ ကျွေးရတယ်။ စကျွေးဖြစ်တုန်းက လေးငါး ခြောက်ကောင်ပေါ့။ အခု ငှက်သတင်း ငှက်ချင်းဆောင်ပြီး ခိုချည်းပဲ အကောင် နှစ်ဆယ် အစိတ်လောက်လောက် လာစားတယ်။
ခိုတွေက အုပ်စုတောင့်တော့ သူတို့အရင်စားကြတယ်။ ပြီးရင် ကျီးကန်း ... နောက်ဆုံးကတော့ စာကလေးပေါ့ ရှေ့က အကောင်ကြီးတွေစားပြီး ကျန်တာလေးတွေ အောက်ကြမ်းပြင် ကိုကျနေတာလေးတွေ လာစားကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေလဲ ခိုတွေက အများကြီးစားသွားလို့ စာကလေးတွေအတွက် မကျန်ရင်လဲ သူတို့အတွက် လိုက်ပွဲထပ်ချပေးရတာပေါ့။ :D ညနေဖက် စောစော အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ရက်တွေဆိုလည်း မမှောင်ခင် သူတို့ရှိသေးရယ် တစ်ခေါက်ကျွေးတယ်။ ဒါကတော့ ပုံမှန် မဟုတ်ဖူးပေါ့။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒါလည်း အလှူလေးတစ်ခုပေါ့။ Bird Flu ဖြစ်တဲ့ အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် အန္တရယ် အထိုက်အလျောက် ရှိနိုင်မယ်ထင်တယ်။ အခုထိတော့ နေ့တိုင်း ကျွေးနေတာပဲ ....
Posted by little moon at 6:30 PM2comments:
Posted by little moon at 11:37 AM No comments:
ပုံလေးကြိုက်လို့ တိုလာတာ။ ဘလော့သို့ကြွလာ မိတ်သဟာအပေါင်း စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းစေရန်အတွက်ပါ။
အဟက် (မှတ်ချက်။ ခင်ဦးမေရဲ့ စတိုင်နဲ့ ရယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည် :P )
Posted by little moon at 1:08 PM 1 comment:
ဒါဟာ Nadal အတွက် ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် Rogers Cup ကို ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅မှာ တစ်ကြိမ် ရခဲဖူး ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ အကျဉ်းအကျပ် အခြေအနေနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ အရှုံးနဲ့ အောက်က လိုက်ကစား ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ စိတ်တည်ငြိမ်စွာ ကြံကြံခံပြီး ကစားနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ Gusquet နဲ့ Quarter မှာဆိုရင် ပထမ set မှာ tie-break နဲ့ရှုံးတယ်။ 12-12 ကျော်အာင် ရေကုန်ရေခမ်း ကစားရတာ ...(ဘယ်လောက်နဲ့ ပြီးသွားလဲတော့မသိဘူး..... ကြည့်ရင်းမီးပျက်သွားလို့) ဒါပေမဲ့ ဒုတိယ set နှစ်ခုကို အနိုင်ပြန်ကစား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Murray နဲ့ Seminal Final မှာတုန်းကလည်း ပထမ set မှာ ရှုံးတော့မလို အခြေအနေကနေ tie-break ရောက်ပြီး အနိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။ Physical Fitness လည်း အကောင်းဆုံး အခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။ Federer က No.1 မှာ လက်ရှိ ရပ်တည်နေသေးပေမဲ့ လက်ရည်အရ ဒီနှစ်မှာ Nadal က အများကြီးသာနေပါတယ်။
Final ပွဲတော့မကြည့်လိုက်ရဘူး။ ညက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်ထွက်နေလို့။ မိန်းမက Nadal နိုင်သွားကြောင်း SMS ပို့ပေးတယ်။ :P ကျွန်တော် tennis ပွဲတွေကြည့်ကြည့်နေတော့ သူလဲ ပိုးကူးသွားပုံရတယ်။ :D
Posted by little moon at 11:05 AM No comments:
Posted by little moon at 2:47 PM No comments:
အချစ်ဆုံးငယ်လေ ...ကျွန်မရယ် သေကာသွားမှဖြင့်၊
လွမ်းစရာ့တေးတွေကို မောင်မဆိုနေနှင့် ... နော်။
ဘယ်သစ်ပင်တွေကိုမှ၊ ကျွန်မရဲ့ မြေပုံဦးမှာ
အထူး မစိုက်နှင့် ရှင်ရယ် ... နော်။
သြော် .. မိုးဖွဲလေးတွေ၊ နှင်းဥလေးတွေနှင့်ပဲ
ကျွန်မမြေပုံထက်က မြက်ခင်းလေး စိမ်းမြမြ
သဘာဝအတိုင်း စိုနေပါစေ ... နော်။
သြော် ... ပြီးတော့လည်းရှင်
သတိရချင်လဲ ... သတိရပေါ့ ....နော်။
မေ့ချင်တော့လည်း .... မေ့သာပစ်လိုက်တော့မောင် ...နော်။
မိုးရေမြမြကိုလည်း၊ ကျွန်မခံစားရမယ် မဟုတ်ဘူးရှင်
ပျို့ဦးပြီးလည်း တက်မလာ၊ ငုတ်ကာလည်း သက်မဆင်း
ကျွန်မလည်း ... သြော်။
ပျော်ပျော်ကြီး မေ့ချင်လဲ မေ့နေမယ်မောင် ... နော်
When I am Dead, My Dearest ..by Christina Rossetti
Christina Rossetti ရဲ့ ဒီကဗျာလေးကို အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ လောက်ကတည်းကနှစ်သက်ခဲ့တာ။ မှတ်မှတ်ရရ တစ်ရက်မှာ ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ဟိုတုန်းက ရှုမ၀ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ဒီကဗျာလေးကို အမျိုးသား တစ်ယောက်ရယ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရယ် ခံစားဘာသာပြန်ထားတာလေးကို နှစ်ပုဒ်စလုံး ယှဉ်လျက် ထည့်ပေး ထားတယ်။ စကားစပ်လို့ အဖေနဲ့ဒီကဗျာလေးတွေအကြောင်းပြောတော့ အဖေက သူ့စာအုပ်ပုံကြားက ကဗျာ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထုတ်လာပြီး original ကဗျာလေးကို ပြပါတယ်။ ဟုတ်တယ် အဲဒီကတည်းက အရမ်းကို ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပေါ့။
အခုရိုက်တင်ထားက ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်ရဲ့ တမ်းတမိခြင်း ဘာသာပြန်ကဗျာများစာအုပ်ထဲကပါ။ အခုညနေ ရုံးကစာအုပ်စင်ကို မွှေနှောက်ရင်း ဒီစာအုပ်လေးကို ပြန်တွေ့လို့ ဟိုလှန်ဒီလှန် လျှောက်ဖတ်နေရင်း ဒါလေးကို ဘလော့ပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။
Posted by little moon at 4:18 PM2comments:
ဇော်ဂျီအဖွဲ့ရဲ့ web site လေး ပြန်တက်လာ ပါပြီ။ ကာလအတော်ကြာ online ပေါ်က ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ site လေးပါ။ ဇော်ဂျီ အဖွဲကို ဆက်သွယ် ချင်ရင်ဖြစ်စေ၊ မေးမြန်းစရာ ဆွေးနွေး အကြံပြုစရာများ ရှိသည် ဖြစ်စေ အဲဒီမှာ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီကို onlineမှာ အမျာစုက သုံးစွဲ နေကြပြီ ဖြစ်လို့ ဇော်ဂျီ site down နေတဲ့ အချိန်တွေ တုန်းကလည်း download လုပ်ယူစရာ နေရာ မရှားခဲ့ပါဘူး။ Mandalay Alpha site ကရယူနိုင်သလို ဘလော်ကာ တော်တော်များများရဲ့ဘလော့များမှလည်း အလွယ်တကူ ရယူ နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဇော်ဂျီရဲ့ site down ဖြစ်နေစဉ်ကာလမှာ zawgyi.org ဆိုပြီး Font အကြောင်း unicode အကြောင်းရေးတဲ့ site တစ်ခုပေါ်လာလို့ အဲဒါကို ဇော်ဂျီအဖွဲ့ရဲ့ siteလို့ အသုံးပြုသူများ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ အခု ဇော်ဂျီအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ www.zawgyi.net ပြန်တက်လာပါပြီ။ ဇော်ဂျီအဖွဲ့ကတော့ ဇော်ဂျီဖွန့်လေးကို ဆက်လက်ပြီး free သုံးစွဲခွင့် ပေးထားမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်များကိုလည်း ဆက်လက် support လုပ်နေဦးမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Posted by little moon at 1:07 PM No comments:
Posted by little moon at 6:18 PM No comments:
Posted by little moon at 4:25 PM 1 comment:
သင်ခဲ့ ပြခဲ့ ပြောခဲ့သူ ....
(ဆရာဇော်ဂျီက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က သူတို့ဆရာ J.S Funivall ကို ဂုဏ်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာတိုလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ မူရင်းကဗျာမှာ ခေါင်းစဉ်ပါ မပါ မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော့်ဘာသာ ပိုစ့် ခေါင်းစဉ်ကို လိုက်ဖက်အောင် ပေးထားတာပါ။ )
Posted by little moon at 4:11 PM No comments:
၀ါတွင်းကာလရောက်လာပါပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတို့ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အစဉ်အလာလေးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆွမ်းလောင်းအသင်းလေးတွေက ရပ်ကွက်တွေ လမ်းတွေထဲမှာ အသက်ဝင်လှုပ်ရှာနေကြပါပြီ။ လမ်းထိပ်လေးတွေ ဓမ္မာရုံတွေမှာ ....... နေ့တိုင်း အာရုဏ်ဆွမ်းကြွတော်မူပါဘုရား ... ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေ တွေ့နေရပါပြီ။ ဓမ္မာရုံလေးတွေမှာအာရုဏ်တက်ချိန် ဆွမ်းလောင်းနိုင်ဖို့ ချက်ကြ ပြုတ်ကြ တပျော်တပါး ဆွမ်းလောင်းကြနဲ့ သာဓုခေါ်စရာပါ။
အဲ ...အခုလို intro ၀င်နေတာက ရီစရာလေးတစ်ခုပြောပြချင်လို့။ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ပေါက်ကရပြောတတ်တဲ့ အဖေ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးတာပါ။ ကျွန်တော် ခပ်ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့။
ဦးဦး ။ ။ သားရဲ့ စေတနာက အဓိကပါကွာ။ စေတနာရှိရင် ဆန်နို့ဆီဘူးတစ်လုံးကို ယာဂု ကျိုပြီး သံဃာအပါးတစ်ရာကို ကပ်တာ အားလုံး ဗိုက်ပူသွားတာတောင် ယာဂုက မကုန်သေးဘူးကွ။ အဲဒီလို ကပ်လှူလို့ရတယ်ကွ ...
ကျွန်တော်။ ။ ဟာ ဟုတ်ပါ့မလား ဦးဦးရဲ့ ဆန်နို့ဆီဘူးတစ်လုံးထဲနဲ့ ...
ဦးဦး ။ ။ မင်းကလဲကွာ ဘုရားခေတ်က ပုံဝတ္ထုတွေ မကြားဖူးဘူးလားကွ .... ဘုရားနဲ့တကွ သံဃာအားလုံးကို လှူတန်းပြီးတာတောင် ထမင်းအိုး ဟင်းအိုးတွေက မကုန်ဘူးဆိုတာ ..
ကျွန်တော်။ ။ အဲဒါက ဘုရားခေတ်လေဗျာ ....
ဒါနဲ့ သူက ဆန်နို့ဆီဘူးတစ်လုံးနဲ့ သံဃာအပါးတစ်ရာ ဗိုက်ပူသွားတဲ့အထိ ဘယ်လို ကပ်လှူရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပါတယ်။
သိချင်ကြလား ....... ? (သူငယ်ချင်းတို့ ဘယ်လို ကပ်လှူကြမလဲဆိုတာ တွေးမိရင်လဲ comment ရေးပေးခဲ့ပေါ့)
ပဲကိုင်လိုက်ဦးမယ် ... နောက်နေ့မှ ပြောပြမယ်။
ကဲကဲ .... ဒီလိုပါဗျ ...(ဦးဦးပြောခဲ့တဲ့လေသံအတိုင်း)
လွယ်ပါတယ်သားရယ် နို့ဆီတစ်ဗူးစာ ယာဂုကျိုကွာ .. ဟုတ်ပြီ .... သံဃာတော်တွေတန်းစီပြီး ကြွလာကြရော ...သားက ယာဂုအိုးဘေးမှာ ယောင်းမလေးတစ်ချောင်းနဲ့ စောင့်နေရုံပဲ (ဘယ်လိုကပ်ရမှာလဲဦးရဲ့) ... ယာဂုအိုးကို ယောက်းမနဲ့မွှေ ... ပြီးရင် အရှင်ဘုရား သင်္ကန်းလေး ခဏပင့်ပါဘုရားဆိုပြီး ဗိုက်ကို ယောက်မနဲ့ ကပ်လိုက် ... ယာဂုတွေက အခုလေးတင် ပွက်ပွက်ဆူပြီးတာလေ ...အား.. ဗိုက်ပူသွားတာပဲ တကာကြီး .... တင်ပါ့ဘုရား ...နောက်တစ်ပါးကြွပါဘုရားပေါ့ .... ဒါနဲ့ သံဃာတော် အပါးတစ်ရာသာ ဗိုက်ပူသွားတယ် ယာဂုတွေက မကုန်ဘူးသားရဲ့ (ဦးဟာကလည်း ပေါက်ကရ ဆွမ်းကပ်တာဆို?) ဦးဦးလည်း ကပ်ပေးတယ်လေကွာ ယာဂုတွေကို ယောက်မနဲ့ ဗိုက်ကို ကပ်ပေးတယ်လေ .....
အော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ.... အဟုတ်မှတ်လို့နားထောင်နေတာ :D ငယ်ငယ်တုန်းကပါ။
Posted by little moon at 11:08 AM2comments:
နည်းပညာဆိုင်ရာ blog တွေ လျှောက်မွှေရင်း တွေ့လာခဲ့တာလေးတစ်ခုကို ကူးယူပြီး မျှဝေပါတယ်။ ကိုယ်တို့တတွေ ခံယူထားတာနဲ့ တော်တော်လေးကို အပ်ကျမတ်ကျ ကိုက်ညီလို့ပါပဲ။
နည်းပညာဆိုတာ လူတွေအကျိုးရှိအောင်သုံးဖို့ပါ ခေါင်းပေါ်တင် ကိုးကွယ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး၊ ဒီအချက်လေးက သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ရံဖန်ရံခါ တစ်ချို့တစ်ချို့တွေ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနောက်လိုက်ရင်း ချာလပတ်လည်ကာ ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်နေတာကို တွေ့တွေ့နေရလို့ပါပဲ။
What is the task of the UI designer? To make UI disappear. ဒါလေးကို တော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အလွယ်ဆုံး အရိုးရှင်းဆုံး UI တစ်ခုဆိုတာ ဖန်တီးဖို့ အခက်ဆုံးပါပဲ။ 2U ဆိုတာလေးကို လက်ကိုယ်ထားဖို့ပါ။ Easy to Understand ရယ် easy to Use ရယ်ပါ။
Read original article at jonoscript.wordpress.com
Posted by little moon at 4:38 PM No comments:
Posted by little moon at 4:17 PM No comments:
အနုပညာခံစားမှုသည် ပြတိုက်များထဲတွင်သာ ရှိသည်ဟု ထင်ခြင်းသည် အမှားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်လျှင် ကျွန်တော်တို့တွင် အနုပညာတွေ တစ်နည်းပြောရလျှင် အနုပညာ စေတနာကြောင့် ပေါ်ထွက်လာသော ၀တ္ထုပစ္စည်းတွေ ပတ်လည်ဝိုင်းနေသည်ကို သဘောပေါက်ကြမည် မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းမပေါ်မီကတည်းက ပင်လျှင် လူတို့သည် မိမိတို့မျက်စေ့ကို ပသာဒဖြစ်စေသော ပုံပန်းသဏ္ဍာန်၊ အရောင်အသွေးတို့ မပါသော အရာများကို ပြုလုပ်၍ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နေခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပါ။ မကြာသေးမီအချိန်အထိ အသုံးကျရုံ သက်သက်မျှသာ ပြုလုပ်ထားသည့် အရာဝတ္ထုများသည် ရှားပါးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင်မူ ဗိသုကာအရိုးခံဝါဒနှင့် ခြိုးခြံရေးဝါဒဟူသော အမွှာညီနောင်တို့ ကောင်းမှုကြောင့် (အလှအပကို ဦးစားမပေးပဲ) အသုံးကျရေးသက်သက်အတွက်သာ ပြုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းတို့သည် များပြားစပြုလာခဲ့ပါပြီ။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သော အောက်တန်းကျသည့် ပျူရီတန် အယူအဆသည် ပျောက်ကွယ်သွားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏အခန်းပတ်လည်၊ ကျွန်တော်တို့သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်နှင့် မီးရထားဘူတာရုံ စသည့်နေရာများကို ကြည့်လိုက်လျှင် မျက်စေ့ကို ပသာဒဖြစ်စေရန်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ရှေးယခင်က မည်ကဲ့သို့ ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့ကြပုံကို တအံ့တသြ တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ အများအားဖြင့် ထိုမျှော်လင့်ချက်များသည် ပြည့်ဝခြင်း မရှိခဲ့ကြပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ဘူတာရုံအမိုးတွင် တပ်ထားသည့် သံပန်းခက်ကြီးများ၏ ပုံစံသည် မျက်စေ့အမြင့်တွင် ပသာဒမဖြစ်ခဲ့သည်မှာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ တစ်ခါက ကြည့်၍ ကောင်းခဲ့သည့် ပုံစံဒီဇိုင်းများကို ယူ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည့်တိုင် ယခုအချိန်တွင်ကား မည်သူ၏ မျက်စေ့ ပသာဒတွင်မှ ကြည့်၍ မကောင်းတော့ပါ။ သို့ရာတွင် ယခုပျက်စီးနေသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် မည်သူမျှလည်း မကြည့်ကြတော့ပါ။ ပုံစံထုတ်လုပ်သူနှင့် ထုတ်လုပ်သူတို့ ကိုယ်တိုင်ပင် ကြည့်ဖို့ စိတ်ကူးကြတော့မည် မထင်ပါ။ သို့ရာတွင် အနုပညာသည် ရှင်သန်နေသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှအရာများကို ဂရုဓမ္မစိုက်၍ ဝေဖန်ရေးသဘောဖြင့် ကြည့်သင့်ပါသည်။
ငြီးငွေ့စရာကောင်းအောင် နာရီပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းရာဖြစ်သည့် ဘူတာရုံထဲမှ အသေးစိတ် မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားမှုများကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်များ ပြောပြနိုင်ကြပါသနည်း။ သို့မဟုတ်လျှင်လည်း ကိုယ့်လမ်းထဲက မီးတိုင်အကြောင်းကို မည်သူမည်မျှ ပြောပြနိုင်ပါသနည်း။ ထိုသို့ မပြောပြနိုင်သေးသမျှ ထိုပစ္စည်းများ အရာဝတ္ထုများသည်လည်း ပုံစံကောင်းလာနိုင်ကြဦးမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သော အနုပညာမျိုးသည် ထုတ်လုပ်သူ အနုပညာရှင်ပေါ်တွင် မတည်ပဲ မျက်စေ့ဖွင့်ထားသည့် စားသုံးသူ ကျွန်တော်တို့အပေါ်တွင် တည်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အရာတစ်ခုတော့ ရှိပါသည်။ ယင်းမှာ အ၀တ်အစားဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ သတိထားကြည့်ကြသည့်အတွက်ပင်လျှင် အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းများသည် (ဆိုပါတော့) ကော်ဇောပုံစံ ဒီဇိုင်းများထက် ကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by little moon at 1:01 PM 1 comment:
Posted by little moon at 11:24 AM No comments:
Posted by little moon at 10:45 AM No comments:
မနေ့ညက ဂျာမန် DW-TV ကလာတဲ့ Drive it ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ဒီကားလေးကို သွားရည်ယိုဖွယ် ပြနေတာနဲ့ တော်တော့်ကို ဖီလင် တက်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီညနေအားတဲ့အချိန်မှာ internet ပေါ်တက်ရှာရင်း ကားကိုမ၀ယ်နိုင်သေးခင်မှာ ပုံလေးတွေ Brochure တွေ download လုပ်တာပေါ့။ သိပ်ဈေးမကြီးပါဘူး။ US ရှစ်သောင်းနဲ့ တစ်သိန်းကြားလောက်ပါပဲ။ ပါးပါးလေးပါ :P
ဒီဘ၀မှာ မသေခင်တော့ ဒါမျိုးလေး တစ်စီးလောက် ၀ယ်စီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်ကောင်း ရောက်နိုင် ပါသေးတယ်။
Posted by little moon at 5:06 PM No comments:
Posted by little moon at 3:38 PM 1 comment:
Arsenal အသင်းအတွက် ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအတွက် အဝေးကွင်းပွဲတွေမှာ ၀တ်ဆင်ကစားဖို့ ၀တ်စုံ ဒီဇိုင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။ ၁၉၈၉ခုနှစ် League Champion ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ၀တ်စုံကို အခြေခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အ၀ါရောင်နဲ့ နက်ပြာရောင် စပ်ထားတာဖြစ်ပြီး လက်မှာ အနီရောင်လိုင်းလေးပါ ပါတယ်။ ဘောင်းဘီက နက်ပြာကို အနီရောင်လိုင်းအကွတ်နဲ့ပါ။ Nike က ထုတ်တာပါ။
Posted by little moon at 7:13 PM No comments:
Posted by little moon at 5:19 PM No comments:
Posted by little moon at 10:55 AM No comments:
Posted by little moon at 10:30 AM 1 comment:
Posted by little moon at 7:58 PM 1 comment:
အခုလေးတင် မြန်မာတိုင်းမ်က သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်နေတာ။ မြန်မာနိုင်ငံဓါတ်ပုံအသင်းက ခွင့်ပြုချက်မရပဲ သူများဓါတ်ပုံယူသုံးတဲ့ အသင်းဝင်တစ်ယောက်ကို ရာသက်ပန်ထုတ်လိုက်တယ်တဲ့။ တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့လူပဲ။ သူများဓါတ်ပုံကို crop လုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲသွားဝင်သတဲ့။ ဓါတ်ပုံလေးက ဖုန်တလောင်းလောင်းထနေအောင် မောင်းလာတဲ့ နွားလှည်းတစ်စီးကို ရိုက်ထားတာ။ မူလဓါတ်ပုံမှာ ဘယ်ဖက် အပေါ်နားမှာ တဲအိမ်လေးပါတယ်။ ခိုးထားတဲ့ပုံမှာက နွားလှည်းကိုပဲ အနီးကပ် crop လုပ်ထားတာ။
ဓါတ်ပုံပိုင်ရှင်က နောက်မှတွေ့ရတာတဲ့။ ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့များ ဒီလိုလုပ်တာပါလိမ့်။ အရှက်တရားတို့ ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာတို့ကို ဘယ်သွားထားသည်မသိ။ ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပုံပညာကို မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားရင် သူများ ဖန်တီးမှုလက်ရာကို ဒီလို မလုပ်ကောင်းပါဘူးနော်။ အသင်းက ထုတ်ရုံတင်မကဘူး တရားစွဲပြီး တစ်ခုခု အရေးယူသင့်တယ်။ ရထားတဲ့ဆုဆိုတာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းအောင် စာတင်သင့်တယ်ထင်တာပဲ။ မြန်မာတိုင်းမ်ကတော့ နံမည်ထည့်မရေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ကိစ္စဆိုတာ (ကျွန်တော့်အမြင်တော့) လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြီး ရှုတ်ချရမှာ။ စိတ်ပျက်စရာ ...
Posted by little moon at 5:31 PM No comments:
Posted by little moon at 10:05 AM No comments:
တောင်ပံလေး ပထမတစ်ချက် အခတ်
ရန်သူနဲ့ ပထမအကြိမ် အတွေ့မှာ
ခုတော့ ခက်ခဲတဲ့လမ်းတွေ စပြီ
နေရဲ့ ၀ါးမျိုမှုကို ခံရသည့်တိုင်
သင့် မြစ်နဒီရဲ့ အေးမြတဲ့ ကမ်းသာများမှာ
နှင်းခါးရဲ့ ခိုက်ခိုက်တုန် အအေးကလဲ
အို ... ဖျော့နွမ်းတဲ့ ၀ရမ်းပြေး
သင့်အဖို့ ဘ၀ဂ်ရယ်လို့လဲ မရှိ
သင့်ကို မြတ်နိုးသူတွေရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ ရှိတန်ကောင်းရဲ့
သင်ဟာ နှင်းခါးရဲ့ ခိုက်ခိုက်တုန် အအေးမှာလဲ
တချို့ကတော့ ကျဆုံး တွန့်ကြေသွားကြပြီ
သင့်ကို တိုက်စားနေတဲ့ တံစဉ်းဟာလဲ
တေးချင်းဆိုသူများရဲ့ ဟာလာဟင်းလင်း ဥခွံဟာလဲ
သင့်ကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ငါ ခုန်ချခဲ့တဲ့
မင်လယ်ငါးဟာ ရေထဲက ထ ခုန်ခဲ့ပြီ
နေရစ်လေဦးတော့ စကားပင်ရိပ်ငဲ့။ ။
Eugenio Montale 'The Magnolia's Shade'
(မြန်မာပြန်သူ မောင်သစ်တည်၊ ၁၉၇၅၊ ဒီဇင်ဘာလ ရှုမ၀)
Posted by little moon at 11:05 AM2comments:
Posted by little moon at 7:33 PM No comments:
၂၀၀၈ခုနှစ် Wimbledon Tennis အမျိုးသမီး ပြိုင်ပွဲများ အတွက်ဆုတွေကို Williams ညီအမကပဲ သိမ်းကျုံး ယူသွားပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲကို Williams ညီအမ နှစ်ယောက်လုံးတက် ရောက်လာပြီး အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြကာ အကြီးမ Venus က အနိုင်ရသွားပါတယ်။ သူက Wimbledon လက်ရှိ ချန်ပီယံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Venus အတွက် ငါးကြိမ်းမြောက်ရတဲ့ Wimbledon Chimpion ဆုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တွဲပွဲမှာလည်း သူတို့ ညီအမနှစ်ယောက်ကပဲ ဗိုလ်စွဲသွားပါတယ်။
အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းဗိုလ်လုပွဲကတော့ ဒီည ရှစ်နာရီခွဲပါ (မြန်မာစံတော်ချိန်)။ Federer နဲ့ Nardal တွေ့ကြတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့။
Posted by little moon at 2:20 PM 1 comment:
မိုးဖွဲကလေး တစ်ပြိုက် နှစ်ပြိုက်ကျလျက် တိမ်တိုက်ကလည်း မညို့တညို့။ ၀ါဆိုပန်းခူး ထွက်လာကြသည်။
တောစပ်တွင် အလေ့ကျပန်းကလေးများ တဖွေးဖွေးနှင့်။ သူတို့၏ အမည်သည် မထင်းရှားလှ။ နန်းသုံးပန်းများကဲ့သို့ စာဖွဲ့ခံ ပန်းကလေးများ မဟုတ်။ အညတရမျှသာတည်း။ ဤအညတရ ပန်းကလေးများကို ရှိသည် ဟုပင် အမှတ်မပြုမိကြ။
သို့သော် သူတို့သည် ၀ါဆိုမီ ပွင့်နေကြ၏။ စေတနာကောင်း မွှေးကြ၏။ တေးကဗျာတို့ဖြင့် အရေးတယူ ဖွဲ့ဆို မခံရသော်လည်း ၀မ်းနည်းအားငယ်ခြင်း မရှိ။ အချိန်တန်လျှင် တောစပ်တစ်ခုလုံး ဖွေးနေအောင် ပွင့်ကြလေတော့သည်။
၀ါဆိုပန်းခူးသူတို့သည် တောပန်းကလေးများထံသို့ ၀မ်းသာအားရ လာရောက်ကြ၏။ ပန်မည် ခြွေမည်ဟူ၍ သဘောမထား။ ဗုဒ္ဓအတွက် ပူဇော်ရန် အလို့ငှာ ရည်သန်ကြကုန်၏။ ပန်းကလေးတို့လည်း ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာနှင့် ပန်းခူးသူတို့လက်တွင် လိုက်ပါကြလေသည်။
ထို့နောက် တောရကျောင်း အနီးရှိ စေတီအိုတစ်ဆူရှိရာသို့ ၀ါဆိုပန်းကပ်သူတို့ တပျော်တပါး တစုတဝေး သွားကြ၏။ စေတီအိုမှာ ရွှေလည်းမ၀င်း။ တန်ဆောင်းလည်းမရှိ။ မျက်နှာငယ်ဖွယ်ပေတည်း။ အညတရ၀ါဆိုပန်းကလေးတို့ကား လူသူမသိရှာသည့် အညတရစေတီအိုအား ၀ါဆိုပန်းကပ်ခွင့်ရသဖြင့် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်ကြကုန်၏။
သူတို့၏အလှဖြင့် အစွမ်းကန် ပူဇော်ပါအံ့။
Posted by little moon at 1:26 PM 1 comment:
Posted by little moon at 1:06 PM 1 comment:
Ph.D.. ဆိုတာ မြန်မာလို နားလည်တာကတော့ ဒေါက်တာဘွဲ့ပေါ့။ ဘာသာရပ်တစ်ခု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ တစ်ဖက်ကမ်းခတ်လောက်အောင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင် နှံ့စပ်သူလို့ပဲခေါ်ရမလား။ ဘွဲ ဒီဂရီမှာ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ပေါ့။ တစ်နေ့က ကိုဇော်မိုးနဲ့ စကားစမြည်ပြောဖြစ်ရင်း ဒီအကြောင်းလေး ရောက်သွားရာက ရေးချင်စိတ်လေး ပေါ်လာလို့။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်က software development management နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ရက်ကြာ workshop လေးတစ်ခုတက်ဖူးတယ်။ ဒီရန်ကုန်မှာပဲလုပ်တာပါ။ လာပြောတဲ့သူက မလေးရှားကပါ။ အဲဒီမှာ သူက ပညာသင်ကြားခြင်းရယ် ဘွဲ့ဒီဂရီတွေရဲ့ အကြောင်းကို ဟာသလေးနှောပြီး ပြောပြသွားတာလေး ပြန်သတိရလို့။
သူပြောခဲ့တာက .... ပညာသင်ကြားခြင်းဆိုတာ အဆင့်ပိုမြင့်လာလောလော scopeက ပိုကျဉ်းသွားလေလေ ပဲတဲ့။ ဥပမာကွာ မင်းတို့ မူလတန်းမှာ အထွေထွေသိပ္ပံဆိုပြီး သင်ကြားရတယ်။ အဲ အထက်တန်းလောက်လဲ ရောက်ရော Physics, Chemistry, Maths, Biology ဆိုပြီးကွဲထွက်လို့ အသေးစိတ်တွေထပ်သင်ရတယ်။ တက္ကသိုလ် နှစ်စလောက်မှာ မင်းက Biologyကို သင်ရတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ မင်းက အပင်တွေထက် အကောင်တွေကို မင်းက ပိုစိတ်ဝင်စားလို့ Zoology ကို မေဂျာအဖြစ်ဆက်လေ့လာပြီး B.Sc ရတယ်။ Master တန်းမှာမင်းက Insets တွေအကြောင်းအထူးပြုလေ့လာလို့ M.Sc ထပ်ရတယ်။ ပြီးတော့ရော Doctorate တန်းဆက်တက်တယ်။ အဲဒီမှာ မင်းက Sexual behavior of ants ဆိုပြီး အသေးစိတ် စုံစုံစိစိ မွှေနှောက် လေ့လာပြီး စာတမ်းတင်လို့ Ph.Dဆိုတဲ့ အမြင့်ဆုံး degree ကြီးရပါရော။
နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးကိုတော့ အင်္ဂလိပ်လိုမှတ်မိနေသေးတယ်။ After you got the highest degree Ph.D, you know nothing expect how the ants f**k....တဲ့ ဟီးဟီး
တိုက်ဆိုင်မှုရှိရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ အကယ်၍ Ph.D တက်နေသူများ (သို့) ရရှိပြီးသူများ ဤပို့စ်ကို ဖတ်မိပါလျှင် ထိုသူတို့ကိုသာ တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းပါကြောင်း .... :D
Posted by little moon at 3:33 PM4comments:
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကင်မရာမ၀ယ်နိုင်သေးတော့ ရသေ့စိတ်ဖြေ ပုံလေးတင်ထားတာပါ။ ကိုသူရကြီး မနေ့ကလာပြောလို့သိရတာ။ D700 ထွက်ပြီတဲ့ mini D3 တဲ့။ Full frame ပေါ့။ ဒီဟာကြီးတော့ ၀ယ်ဆော့နိုင်လောက်အေင် မချမ်းသာပါဘူးဗျာ။ ဈေးက သုံးထောင်လောက်ရှိမှာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကတည်းက ကိုသူရတို့ သခင်ကြီးတို့ကို အားကျပြီး Nikon D Series တစ်လုံလောက် ၀ယ်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးနေတာ အခုထိ မ၀ယ်ဖြစ်ပါဘူး။
ကိုသူရရဲ့ D200ကြီးကို ယူယူရိုက်ကြည့်ရင်း feel တက်နေတာ။ သခင်ကြီးကတော့ အားပေးရှာပါတယ်။ ခင်ဗျား လက်လောက်နဲ့တော့ D40လောက်ပဲဝယ်ကိုင်ပါဗျာတဲ့။ အဲဒီ D40 လောက်တောင် မ၀ယ်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ဖွတ်ဂလိ ဒင်္ဂါးကလည်း ရှားသကိုးဗျ။ ၀ယ်ရင်လဲ Camera အပြင် Lens တို့ တခြား တန်ဆာပလာတွေလဲ ၀ယ်ရဦးမှာကိုး။ အခု D Series က 700 ရောက်နေပြီဆိုတော့ D3500 4000 လောက်ရောက်တဲ့ အချိန်လောက်ဆိုတော့ ၀ယ်နိုင်လောက်ပြီထင်ပါတယ် :D
Posted by little moon at 11:45 AM No comments:
Posted by little moon at 12:35 PM2comments:
Posted by little moon at 2:38 PM No comments: